Somaliya oo ashtako ka dhan ah Kenya u gudbisay IGAD | Dhacdo
Somaliya oo ashtako ka dhan ah Kenya u gudbisay IGAD
Dowladda Somaliya ayaa warqad ka dhan ah Dowladda Kenya u gudbisay Urur Goboleedka IGAD, oo ay ku mideysan yihiin Dowladaha Geeska Afrika.
Qoraal saqdii dhexe ee caawa lagu daabacay barta Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliya ku leedahay Twitter-ka ayaa lagu sheegay in warqadaasi loo gudbiyay Abdalla Hamdok, Ra’iisal Wasaaraha Sudan ahna Gudoomiyaha Golaha IGAD.
Tani waxay ku soo aadaysaa, iyadoo galabta uu Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi gaaray Magaalada Nairobi, berritana uu kula kulmi doono Madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Somaliya ayaa 29-kii bishii hore ee November u yeeratay Safiirkii Kenya u joogay, Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, halka Safiirkii Kenya ee dalka u fadhiyay, Amb. Lucas Tumbo lagu wargeliyay in dalkiisa uu wadatashi ugu laabto.
Xukuumadda Muqdisho ayaa Nairobi ku eedeysay in ay Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ku cadaadineyso inuu fuliyo ajandaheeda siyaasadeed, taasoo liddi ku ah heshiiskii siyaasadeed ee doorashooyinka dalka, isla-markaana ka hor imaaneysa hab dhaqanka diblomaasiyadeed ee dowladaha deriska ah.